Sawiro Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo Weerar Culus Ku Qaaday Hoteel Ku Yaala Kaabul. – Bogga Calamada.com
Sawiro Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo Weerar Culus Ku Qaaday Hoteel Ku Yaala Kaabul.
Weerar culus oo xoog ku gal ah ayaa lagu qaaday Hoteel ku yaala magaalada Kaabul ee xarunta dalka Afghanistan,iyadoona faahfaahin laga helayo weerarkaasi.
Hoteelka la weeraray oo lagu magacaabo Intercontinental ayaa ka mid ah hootalada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Kaabul waana hoteel ay Yahuuda leedahay,waxaana hoteelkan deganaay saraakiil American iyo xubno kale oo gaalo caddaan ah.
Weerarkan xoog ku galka ah oo socday muddo Afar iyo Toban saac ah ayaa xiligii uu bilaabanayay waxaa gudaha hoteelka ka socday kulan u dhaxeeya saraakiil gaalo caddaan oo u badan saraakiil American ah iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul.
Sawiro laga soo qaaday hoteelka ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray hoteelka iyo Holac ka baxayo Hoteelka,sidoo kale Sawirada ayaa muujinaya saraakiil Caddaan iyo kuwa maamulka Kaabul oo daaqadaha sare hoteelka Jaranjaro looga soo dajinayo.
Ragga weerarka xoog ku galka ah ku qaaday hoteelka ayaa si toos ah ula wareegay gacan ku heynta hoteelka waxeyna Toogasho ku bilaabeen saraakiishii caddaanka ee ku sugneed gudaha hoteelkaasi.
Mid ka mid ah dadka Afghaaniyiinta ah ee Ragga hubeysan ee la wareegay hoteelka ay soo fasaxeen ayaa warbaahinta u sheegay in Ragga hubeysan ay sii daynayeen dadka Shacabka fara ku tiriska ah ee xilliga weerarka ku sugnaay gudaha Hoteelka,balse ay Madaxa ka tooganayeeyn saraakiisha maamulka Kaabul iyo kuwa gaalada caddaanka ee ku sugnaay gudaha hoteelka.
Inta la xaqiijiyay weerarkaasi xoog ku galka ah waxaa lagu dilay Tobaneeyo ka tirsan saraakiisha Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa Gaalada NATO ee duulaanka ku jooga dalka Afghanistan tiro kalane dhaawacyo culus ayaa soo gaartay.
Maamulka daba dhilifka Kaabul ayaa isagana dhankiisa askar iyo saraakiil ku waayay weerarkaasi xoog ku galka ah,iyadoona muddo Afar iyo Toban saac ah askarta Mareykanka iyo kuwa daba dhilifka Kaabul ay dagaalamayeen banaanka hoteelka.
Mas’uuliyadda Weerarkan xoog ku galka ah waxaa sheegtay Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan,waxeyna Imaaradu xustay in weerarkan uu qeyb ka yahay howlgalka Al-mansuuriyah.
Qoraal kasoo baxay Imaarada kuna saxiixanyahay Afhayeenka Imaarada Islaamiga Afghanistan Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid ayeey Imaaradu ku cadeysay in weerarkan Ingimaasiga ah ay fuliyeen Shan Mujaahid oo ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga kuwaasi oo lagu kala magacaabo.
3-Khaliil oo deegaan ahaan kasoo wada jeeda Wilaayada Qandahaar ee Konfurta Afghanistan.
4-Bashar oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Faryab ee Waqooyga dalka Afghanistan.
5-Cubeydah oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Gowr oo dhacda Bartamaha dalka Afghanistan.
Gaba gabadii qoraalka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu xusay in weerarkan la qorsheeyay in la qaado habeenkii Jimcaha ee lasoo dhaafay Balse Imaaradu ay hakisay weerarkan kadib markii la ogaaday in gudaha hoteelka ay ka socoto Xaflad Aroos oo dadka deegaanka ah si aysan waxyeelo usoo gaarin dadka Shacabka ee ku sugan goobta xafladda ee hoteelka.
Ugu dambeyntii weerarkan ayeey Imaaradu fulisay habeenkii Axadda kadib markii la ogaaday in gudaha hoteelka uu kasocda kulan u dhaxeeya Saraakiisha NATO oo Mareykanku ku jira iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul taasi oo horseeday in inta badan la xasuuqa saraakiishii Cadowga ee ku sugneed gudaha hoteelkaasi.
Weerarkan ayaa kusoo aadaya xilli dhawaan taliska ugu sareeya ciidamada dowlada Saliibiyadda Mareykanka uu qiray in Mujaahidiinta Dhaalibaan ay go’doomiyeen guud ahaan dalka Afghanistan islaamrkaana Mareykanka uu ku fashilmay duulaankii uu ku qaaday dalkaasi.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Weerarka Hoteelka.